Suuqgeynta Dijital ah & Saameynta Fiidiyowga | Martech Zone
Suuqgeynta Dijital ah & Saameynta Fiidiyowga
Isniin, February 10, 2014 Douglas Karr
Saaka waxaan warbixino gaarsiinay mid kamid ah macaamiisheenna oo nala joogay dhowr sano. Waxay leeyihiin degel weyn oo ku kordhay taraafikada raadinta la xidhiidha ku dhowaad 200% sanadkii la soo dhaafay waxayna leeyihiin noocyo kala duwan oo sawir iyo caddaan ah si ay ugu qanciyaan iibsadayaasha inay isdiiwaan geliyaan oo ay bilaabaan inay eegaan xalkooda. Waxa kaliya ee aan ka aragno inay ka maqan yihiin degelladoodu waa waxyaabaha ku jira fiidiyowga. Waan ognahay, gacanta koobaad, fiidiyowga waa loo baahan yahay hadda shirkad kasta oo dooneysa inay khadka tooska ah kula tartanto.
Tani infographic oo ka socda Sharaxayaasha Muuqaalka wuxuu sawirayaa sawir aad u qeexan marka loo eego saameynta fiidiyowgu ku leeyahay suuq geyntaada guud ee dhijitaalka ah. Xogta ayaa naxdin leh:
63% maamulayaasha sare waxay booqdeen goob iibiya ka dib markaad daawato fiidiyow.
Fiidiyowyada goobaha tafaariiqda celcelis ahaan martida ka dhigtay daqiiqado 2 dheer, u beddelay 30% wax ka badan waxayna kordhisay celceliska iibinta tikidhada 13%.
68% ee tafaariiqleyda ugu sareysa hadda adeegso fiidiyow iyada oo qayb ka ah istiraatiijiyadooda suuq geynta dijitaalka ah.
Fiidiyow fiidiyow ah ayaa kordhiya fursadda calaamaddaadu ay saaran tahay bogga hore ee Google natiijada mashiinka raadinta 53 jeer!
85% macaamiisha waxay u badan tahay inay wax iibsadaan kadib markay daawadaan fiidiyoowga sheyga.
Tags: marketing digitalfiidiyowga e-commercevideo sharaxefiidiyeyaasha sharraxasharaxaad videosFiidiyowyada Suuqgeyntawax soo saarka fiidiyowgavideo tafaariiqdaheerka beddelashada videovideo seo
Sendwithus: Wax ka beddel, Tijaabi oo Cabbiro Email Macaamil
Go'aan Horeedaba: Qabashada iyo Jawaab celinta Darajada
Sababta ugu weyn ee keenta burburka dalabkan ayaa ah farsamadeena mar walba sii kordheysa. Qof kastaa wuxuu leeyahay taleefannada casriga ah oo uu ku daawan karo fiidiyowyada socdaalka. Iyo maadaama ay runti ku qanacsan yihiin sharraxaadda iyo arrimo kale awgood, dadku waxay u muuqdaan inay wax badan iibsadaan ka dib markay daawadaan fiidiyowyada. Maqaalka weyn ee habka, xitaa haddii ay tahay mid hore.